China pabrik fanamboarana fako sy mpanamboatra | Boselan
Tanky GFS, dia azo zaraina ho faritra ho an'ny fitsaboana fanadiovana, mora kokoa sy haingam-pandeha kokoa, famolavolana mora kokoa.
Ny famolavolana tankina sy ny serivisy fananganana gFS
1. Ny ekipa mpamorona matihanina BSL tank dia hanome serivisy drafitra famolavolana haingana rehefa vita ny fanontanianao, ny fenitra endrika endrika ho an'ny AWWA D103-09, ary ny fenitra famolavolana vita amin'ny volavolan-tsolika OSHA iraisam-pirenena.
2. Miaraka amin'ny milina fanodinana mandroso sy ny tsipika famonoana enamel, ny fahafahantsika famokarana dia afaka hahatratra 160 takelaka / andro, ary ho azo antoka fa ny takelaka tsirairay dia manana fahana tsara vita amin'ny fametahana vita amin'ny famoronana tsara.
Mba hahazoana antoka fa afaka mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny kalitao vokatra, hanao ny fisavana isika aorian'ny dingana vita amin'ny lamba tsirairay, toy ny fitsapana fialan-tsasatra 1500V, fanandramana matevina, fitsapana adhesion sy ny sisa. Miaraka amin'ny fanaraha-maso hentitra ny ekipan'ny QC an'ny ekipa matihanina dia efa ekena faobe ny kalitao vita amin'ny lambam-bidy.
Famonosana sy fitaterana
1. Kitapo fanondranana matihanina ho an'ny fandefasana ranomasimbe: voaaro ny lambam-baravarana enamel rehetra, arovan'ny PE foam, avy eo alaina amin'ny boaty kitapom-batana na paosy.
2. Serivisy fitaterana: Mba ahafahana manome serivisy tsara indrindra, ny fiara mifono vy BSL dia afaka manampy amin'ny fandefasana fandefasana ranomasina raha vao vonona ny fiara.
Previous: Vondron'ny fitsaboana fanjaitra
Fitsaboana ny vilany ao amin'ny Digester Tank
Ny fitsaboana ny Septic Tank Wastewater
Tankovan'ny fikarakarana rano
Tankafizin'ny fitsaboana maloto